Siqoqekile isilahla se-Renault | Isolezwe
Siqoqekile isilahla se-Renault
Isolezwe / 21 June 2012, 07:36am /
UMA ubhekisisa kahle islahlamatende sakwa Renault esisha nesidala uzowubona umehluko kusuka ngemuva kuze kuyoshaya phambili noma usungena ngaphakathi. ISlahla esihla sidle ngokuqoqeka kanti esidala besindlalekile
INSIZWA ebesinayo kwiTopGear ibuze ukuthi kungani njalo abahlaziyi nababhali bezimoto lapha eNingizimu Afrika bahlale njalo bencoma izimoto kodwa, abethuli bohlelo lweTopGear kube khona abazihlaba bazihlikize.
Ngimphendule ngokuthi ngokujwayelekile ukubona kwabantu akufani futhi okumele akuqonde ukuthi muva nje sekukhona ukusebenzisana okuningi phakathi kwezinkampani zezimoto. Okunye engimtshele khona wukuthi ezinye izimoto ezihlaziywa kwiTopGear zigcina zingafikanga kuleli.
Okunye engimtshele khona wukuthi nazo izinkampani zezimoto azisavele nje ziqhamuke nemoto kodwa esikhathini esiningi ziqale ngokuzwa amanzi ngobhoko kubantu ukuthi imoto enjani abangathanda ukuthi yakhiwe iphinde ibe nani. Bheka nje isilahla sakamuva senkampani yakwaRenault ukuthi basishintshe kanjani. Kuyacaca ukuthi bahlale phansi bawenza kahle umsebenzi wabo.
Nakuba lesi silahla sidlisela ogageni izimbangi zaso kodwa siyobe asenzi ubulungiswa uma sizosiqhathanisa nezinye izimoto esisesigabeni sazo.
Ubulungiswa esingabenza wukuthi siyiqhathanise nendala yakwabo engangenanga kahle kubantu. Uzoqaphela ukuthi lena idle ngokuba yinde ngoba ingu-4 485 mm okunyuke ngo-130 mm kwendala, yase iyandlaleka yaba ngu-2 609 mm kwi wheelbase, okukhule ngo-87mm.
Noma kwaRenault bethi isikhala ngemuva basandisile kodwa akukhona engikubonile ngesikhathi ngihamba ngayo.
Abantu abakhulile bathwala kanzima ngemuva. Noma ngihambe ngayo ibanga elingelide ngenxa yesimo sezulu kodwa ngiphoqile ukuyivula ngathola ukuthi kuthatha imizuzwana engu-22, bese kuthi ukuyivala kube imizuzwana engu-21 ngaleyo ndlela lokho kuyibeka ezingeni lezinye zezilahla ezivuleka zivaleke ngesivinini esikhulu.
Ngibuthandile ubuchwepheshe obusha kule Megane CC obubizwa nge-“short drop” obenza ukuthi amawindi anyuke wonke sakuvaleka. Lokhu kusiza ekutheni noma kukhona ozama ukufaka isandla emotweni angakwazi.
KwaRenault bazishaya isifuba ngokuthi lena inguganaboya yeslahla ukhakhayi lwayo inkampani iKarmann eyaziwa umhlaba wonke ngokwakha ukhakhayi oluqinile lwezilahla. Iyakwazi ukulayisha abantu abane bahlale ngokukhululeka noma mina kungeyiyo into engiyincomayo ukuthi islahla silayishe size sinyinyitheke ngale ndlela.
Isikhala sebhuthi asisimbi neze ngemuva ngoba uma ivaliwe isikhala siba ngu-417 dm3 kanti uma ivuliwe siba ngu-211 dm3.
Injini yayo engu-1.4 litre incane kodwa iwuhlobo lweTCe okumele (iTurbo Control Efficiency) okuyizinjini ezisanda kwethulwa ezimotweni zakwaRenault.
Le njini ikhiqiza amandla afinyelela ku-96kW kanye ne-torque engu-190Nm.
Ngebanga lika-100km isebenzisa uphethiloli ongu-7,3 litres. Iphuma ne-ABS kanye ne-electronic breakforce distribution, emergency Brake Assist ne-Electronic Stability Control. Iphuma ne-service Plan yeminyaka emihlanu emuva kokuhamba ibanga lika-100 000km kanye ne-warranty yeminyaka emihlanu.